в Nhau dzeRussia
Kwemwedzi mipfumbamwe yegore rino, Russia yakatumira kunze zviuru mazana maviri nemakumi masere nezviuru zvematani embatatisi (chikafu nembeu), inova inodarika 254,8% kupfuura panguva imwecheteyo gore rapfuura, akadaro Roman Nekrasov, director wedhipatimendi rekugadzira goho rebazi rezvekurima. Mukutaura kwemari, kunze kwenyika kwakawedzera ne36% (kusvika kumadhora 38,7 mamirioni, muna 30,3 huwandu hwacho hwaive hafu iyoyo).
Sekureva kwaNekrasov, vatengi vatengi vembeu yedu mbatatisi ndiAzerbaijan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Serbia, Turkmenistan, Belarus. Uye tafura mbatatisi iri kudiwa muUkraine, Uzbekistan, Georgia, Moldova, Tajikistan.
Udmurtia inotumira pamusoro pe1,2 zviuru zvematani matatata kuKazakhstan
Maitiro echiFrench mafrimu anoitwa: iyo munda-kune-ndiro nzira
Solanuz chirimwa ndicho chega bhizinesi muCentral Asia, inonyanya kugadzira kugadzirwa kwemiti-yakapera zvigadzirwa kubva kumatatata
PC "Miloslavsky" yakatanga kugadzirisa mbatatisi yechirimwa chitsva
Anopfuura zviuru makumi matanhatu nematanhatu ematani ematatata akagadziriswa mudunhu reMoscow
Iyo Tyumen dunhu inoronga kuburitsa zvigadzirwa zvekurima mu2020 padanho remadhora 19 miriyoni, na2024 - $ 30 mamirioni
Bryansk mudunhu yakawedzera huwandu hwekutengesa mbatatisi ne4,6 times
Muchokwadi, Russia yakagara iri imwe yevatungamiriri vatatu mukugadzirwa kwembatatisi, anodaro Aleksey Krasilnikov, director director wePotato Union. Mukati mekuverengwa kwemaviri ekurima (2006 na2016), mamirioni mapfumbamwe ematani mune yekutanga uye mamirioni masere matani mune yechipiri "akadonhedza" nekuda kwezvivakwa zvemumba. Nekudaro, huwandu hwacho hwakadonha kubva pamatani makumi matatu nemashanu kusvika makumi maviri nemaviri. Uye Ukraine yaive pamberi nematani makumi mana nemazana mana emamiriyoni ematoni embatatisi. Inoita chinzvimbo chechitatu mushure meChina (mamirioni 9-8 ematani) uye India (matani emamirioni 35-22,2).
Sekureva kwenyanzvi, Russia ichine chinzvimbo chisina kusimba pane zvekutengesa kunze. Kubva 2014, kuburitswa kwembatatisi kwakura zvakapetwa kashanu, kunyanya nekuda kweDonbass, uko kwatinoita gore rega rega kusvika zviuru zana nemakumi maviri ematani. Panguva imwecheteyo, mwaka wadarika, pakatarisana nekusanaya kwemvura muUkraine, matapiri edu akaenda kwete chete kuDonbass, asiwo kunzvimbo yepakati penyika. Nekudaro, anenge mazana mazana maviri nemakumi mashanu ematani matapiri eRussia akaunzwa imomo, ayo akaendawo kuUkraine kuburikidza neBelarus. Nekudaro, svondo rapfuura, pakatarisana nekukohwa kwakanaka gore rino, Dare reUkraine rakafunga nezvenyaya yekuvhara kupinzwa kwematata eRussia. Naizvozvo, ino cheni yekutengesa inogona, nepashoma, kudzikira.
Asi Aleksey Krasilnikov anofunga chinonyanya kuvimbisa gwara rekugovera zvigadzirwa zvine huwandu hwakawedzerwa - machipisi, hupfu hwembatatisi uye makeke Iyo jogirafi yezvigadzirwa pano inogona kunge yakatambanuka - kubva kuChina kuenda kuLatin America.
Nhamba dzeEuropean dzinoti tani yega yega yechipiri inogadziriswa, nepo muBelgium, semuenzaniso, 85%, nyanzvi inonyora. Nhasi (kusingabatanidzi dzimba), chikamu chezvinhu chinoburitsa matani emamirioni 7-7,5: miriyoni imwe chete yematani yasara yembeu yemwaka unotevera, ingangoita mamirioni 1 miriyoni ichaenda kunogadziriswa mwaka uno. Uye izvi, chokwadika, hazvina kukwana, anodaro Krasilnikov.
“Kana paine chirongwa chakasarudzika chehurumende chekutsigira kugadzirwa muchikamu chembatatisi, zvinogona kunge zvakanaka. Nekuti nhasi mari yekudyara, kunyanya yekushandisa, yezvirongwa zvakadaro zvakakura kwazvo. Asi bhawa rinofanirwa kusetwa kuitira kuti kaviri kugadzirisa uye kuunza padanho reEuropean, "yakadaro nyanzvi.
Tags: kugadzirisa mbatatisiMbatatirwa kunze
Agro Space: mutungamiri weagro wevarimi vekurima